Kusolwa ubunkabi ebulawa yiqulu - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa ubunkabi ebulawa yiqulu
Kusolwa ubunkabi ebulawa yiqulu
Nyakenye kubulawe uyise nosana ngendlela efanayo
LAPHA amaphoyisa abeqoqa ubufakazi emuva kokudutshulwa kubulawe uMnu Mcebi Fana Madondo (34). ISITHOMBE: SITHUNYELWE
THUKA izanya umphakathi waseNhlawe, eWeenen, emuva kwesigameko sokuhlaselwa komndeni wakwaMadondo kwabu-lawa ilungu lawo ngabantu abangaziwa.
Kayaziwa imbangela yokubulawa kukaMnu Mcebi Fana Madondo (34) okuthiwa uhlaselwe ngabantu abangaziwa ngoMgqibelo ekuseni esendlini kubo. Kubikwa ukuthi kugasele iqulu labantu abebengaphezulu kuka-20 bephethe izinhlokohlela zezibhamu, bazungeza umuzi wakwaMadondo maqede bavulela nge-nhlamvu bebhekise egunjini ebelihleli uMnu Madondo.
Kuthiwa ngendlela okwenzeke ngayo, bekubonakala ukuthi ababulali baqonde yena umufi, njengoba kuthiwa abekhona namanye amalungu omndeni kwezinye izindlu, kodwa aphuma engenawo umyocu. Kuthiwa abantu abebedubula bebeze basho nokuthi ngeke bahambe bengaqedile ngaye.
ILANGA lihabule ngomthombo walo okule ndawo ukuthi kwenzeka lokhu nje, nangonyaka odlule uke wahlaselwa lo mndeni kwashona ubaba wakhona nengane kamufi ebinezinyanga eziwu-7 izelwe. Kuthiwa nakusona lesi sigameko, kwatheleka inqwaba yamadoda angaziwa azungeza umuzi maqede avulela ngenhlamvu.
Nakusona lesi sigameko sokuqala, umthombo uthi kunezinsolo eziqinile zokuthi abahlaseli babefuna umufi kodwa bagcina bengamtholanga njengoba kwagcina ngokubulawa kukayise nengane yakhe. Umthombo uthi umufi kusolakala ukuthi ubeyinkabi, yingakho ehlaselwe yinqwaba yamadoda.
“Sibi isimo lapha emphakathini, le nto yenzeke ngezikhathi zasekuseni, kasazi ukuthi baqhamuke kuphi laba bantu, sizwe sekuqhuma izibhamu kuloya muzi. Ngicabanga ukuthi iphelile imizuzu ewu-30 bedubula, kwazise umufi ubengaphakathi endlini.
“Into esithusa kakhulu wukuthi kasiyazi imbangela yokuhlaselwa kwakhe. Lapha endaweni kuke kwaba khona ukuhlaselwa kwabantu kusolwana ngobunkabi. Izigodi ebezilwa zimbili, esaseNhlawe nesakwaMadondo. Kodwa-ke leyo yinto eyagcina ixoxiwe yadlula, manje uma sekuhlaselwa abantu ngale ndlela, kwenza sethuke ngoba kasazi noma kusayileyo yimpi yini,” kusho umthombo onxuse ukuba ligodlwe igama lawo. UMnu Phangukwenza Mvelase, oyinduna kule ndawo, uthe uzwile ngalesi sigameko, wathi isimo sesisibi kakhulu emphakathini.
“Bese ngiyibikelile inkosi ngesigameko esenzeke kuloya mndeni. Kasazi ukuthi kwenzeke-ni kodwa umphakathi wethukile ngento eyenzekile,” kusho yena.
Imizamo yokuthola umndeni wakwaMadondo kayiphumelela-nga njengoba ucingo lwakhona belungangeni futhi lungayithathi nemiyalezo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala, kanti akukaboshwa muntu. Uthi ngokombiko kufike iqulu labantu lavimbezela umndeni labe selidubula umufi.
Uthi amaphoyisa athole izinhlamvu eziwu-111 endlini kamufi nemoto, uphenyo lwamaphoyisa oluveze ukuthi yebiwe.
Previous articlebakhalela ithambo ngowomndeni owathunjwa
Next articleiSimanga engcwatshwa ehleli emotweni